Izindaba - IMilan Fur Fashion Show 2019
Imfashini eyodwa yoboya obuseMilano ephezulu nabesifazane abakulungele ukugqoka umbukiso
Februwari 22-25, 2019
Eyakamuva iMilano izobanjwa kusukela ngoFebhuwari 22 kuya ku-25, 2019 e-fieramilanocity
IMilano phambilini ibiyaziwa njengembukiso wezimboni owaziwa kakhulu ngemikhiqizo yoboya. Kusukela yazalwa ngo-1996, i-mifur isiphenduke indawo ebalulekile yabakhiqizi boboya noboya base-Italiya ukwethula imikhiqizo emisha nokukhipha imininingwane mayelana nezinkathi zomkhiqizo. Njengomholi wethrendi, i-mifur isiphenduke indawo yokuthola umoya yezitolo ezikhethekile, izitolo zomqondo, izitolo nezitolo ezinkulu. Kuthatha imfashini njengolimi noxhumana nabo bebhizinisi njengokusekelwa kwayo ukwakha ibhuloho phakathi kwezimpahla zase-Italy nemakethe yomhlaba.
Ama-342 brand avela ezinkampanini ezingama-269 abambe iqhaza embukisweni owodwa weMilano spring ngesizini edlule. Phakathi kwabo, i-China fur chamber of Commerce ihlele ababonisi abangama-Chinese abangaphezu kwama-40 ngendawo yombukiso ecishe ibe ngamamitha-skwele ayi-1000. Lo mbukiso uphinde wakhanga abathengi abangochwepheshe abangama-10980 abavela kuwo wonke umhlaba, ngaphezu kuka-60% wabo ababengabathengi baphesheya kwezilwandle ngaphandle kwase-Italy.
I-China fur chamber of commerce yi-ejenti ekhethekile ejwayelekile ye-mifur e-China. Kuze kube manje, ihlele amabhizinisi asekhaya ukuhambela imibukiso e-Italy iminyaka eyisikhombisa elandelanayo. Ngo-2019, indawo yombukiso icishe ibe ngamamitha-skwele ayi-1000, futhi uhlelo oluhlanganisiwe lokuhlobisa olukhethekile olunophawu lwesiShayina lwenzelwe ababonisi, okwenza isithombe sedokodo sivelele kakhulu.
Umenzeli okhethekile we-mifur eChina - igatsha loboya laseChina Chamber of Commerce lokungenisa nokuthekelisa ukudla, umkhiqizo womdabu kanye nokufuya
I-2019 The One Milano fur fair yavulwa, Silapho.
5, Mashi 1th 2016 I-ShangHai East China Fair, Umbukiso wavulwa .Sibambe iqhaza kulo mbukiso.